Tambajotra informatika ho an'ny SME: Fampidirana | Avy amin'ny Linux
Taorian'ny 2 taona sy tapany tsy nijanonan'ity sehatra nomerika ity, izay ankafizinay tokoa ny famakiana ny lahatsoratray, miverina manohy ny fandraisana anjaranay amin'ny fahalalanay ambany ho an'ny tontolon'ny Free Software izahay.
Araka ny efa nambaranay hatrizay, dia "Teboka fidirana iray hafa" ihany no ho hitanao ao amin'ny lohahevitra tsirairay. Tsy mody mahalala ny zava-drehetra isika, ary tsy mody manolo ny fitaovam-pianarana tena tsara hitantsika ao amin'ny Boky Torolàlana na iray isaky ny baiko; amin'ny lahatsoratra hafa navoaka tao amin'ny Village WWW; haisoratra manokana; wiki natokana ho an'ny programa na rafitra miasa; boky, sns.
Tsy manam-potoana na fahalalana ampy hamoahana fitaovana tena tsara toy ny boky amin'ny endrika PDF «Fanitsiana ny mpizara miaraka amin'ny GNU / Linux«, Nosoratan'ny mpanoratra Joel Barrios dueñas, compendium izay tena atolotray ny fandinihany am-pitandremana - izay tsy vakiana haingana sy fampiharana fotsiny, ho an'ireo izay mampiasa CentOS, OpenSUSE, Debian, na fizarana LINUX hafa.
Hanomboka andian-dahatsoratra amin'ny Tambajotra informatika, tena ilaina amin'ny fiasa mety ho an'ny orinasa kely sy salantsalany na salantsalany izay, satria ny anarany dia voasoratra any amin'ny firenena miteny Espaniôla.
Manantena izahay fa ny ezaka sy ny fotoana natokana ho an'ny fanomanana ny lahatsoratra rehetra dia hovalian'ny famakiana anao sy ny fahaizananao misolo tena anao.
2 Lahatsoratra efa navoaka
2.3 BIND, Isc-Dhcp-Server, ary Dnsmasq
2.4 Fotodrafitrasa, fanamarinana ary serivisy
3 Lohahevitra sasantsasany no resahina ary hodinihina
3.1 Ny serivisy fanamarinana sy ny serivisy dia mifantoka amin'ny SME
4 Tolo-kevitra fiaraha-miasa
Ireo tompon'andraikitra amin'ny fanompoana an'ity karazana tambajotra ity, na Administrator ny lohateny, Mpitantana tambajotra, Mpitantana ny rafitra, Sysadmin, na anarana hafa, dia manana andraikitra izahay hanome amin'ny fomba mangarahara ho an'ny mpampiasa ny toeram-piasana, andiany iray manontolo an'ny Serivisy amin'ny tamba-jotra manao ahoana ny Famahana ny anaran'ny domain; Adiresy IP Dynamic IP; fidirana amin'ny Internet; Serivisy fandefasana hafatra sy mailaka Electronic; Serivisy fanamarinana ny mpampiasa sy ny milina, ary lisitra lava misy serivisy hafa izay hiankina amin'ny sakany sy ny tanjon'ny Tambajotra.
Hahita karazana, habe, ary tanjon'ny informatika tsy mitovy izahay: ny sasany tsotra ary ny sasany sarotra; ny sasany hanome ny serivisy Office and Accounting ho lehibe; ny hafa manokana amin'ny asan'ny Computer Aided Design, na CAD; tamba-jotra masinina miaraka amin'ireo mpampiasa manokana amin'ny fandefasana rafitra isan-karazany, raha fintinina, El Mar.
Ny habaka sy ny atin'ny Network Networks dia toy ny nolazain'i Christopher Columbus: "La Mar Oceana." Ny ohatra faratampony, araka ny hevitro: The WWW Village na ny Internet.
Adala ny manandrana manazava ny tsirairay amin'ireo mety ho karazana tambajotra, ary koa ny serivisy mety ilainao ilaintsika amin'ny tambajotra iray.. Ary tsy adala isika, na farafaharatsiny izany no eritreretinay. 😉.
Noho izany, hifantoka amin'ny fahita indrindra isika Kilasy «C» Tambajotra eo an-toerana, miaraka amin'ny ankamaroan'ny toeram-piasany miaraka amin'ireo rafitra miasa Microsoft © Windows, ary miaraka amin'ny fidirana amin'ny Internet. Hiresaka momba ny serivisy ilaina sy ny be mpampiasa indrindra izahay.
Lahatsoratra efa navoaka
Ny lisitry ny lahatsoratra navoaka -aminà baiko mirindra sy tsy miankina amin'ny datin'ny famoahana- izay havaozina isan-kerinandro, dia ireto manaraka ireto:
Ny KDE haingana sy kanto amin'ny openSUSE 13.2 Harlequin
BIND, Isc-Dhcp-Server, ary Dnsmasq
DNS sy DHCP ao amin'ny Debian 8 «Jessie
Dnsmasq sy Active Directory®
Fotodrafitrasa, fanamarinana ary serivisy
[Hevitra] Serivisy momba ny fotodrafitrasa sy ny fanamarinana
Fikirakirana sy fitantanana tambajotra
Squid + Fanamarinana PAM
Raha mijery akaiky isika, dia manandrana manolotra topy maso ny fomba hiatrehana ny fampiharana ny SME Network, mandray ho teboka fanombohana fizarana roa mifantoka tanteraka amin'ny tontolon'ny asa -CentOS / Satroka Mena y openSUSE / SUSE- ary ny fitsinjarana ankapobeny misy indrindra amin'ny Linux Universe, izay araka ny hevitray dia Debian.
Ny filahatr'ireo rohy etsy ambony ireo dia indraindray tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana nanontana ny lahatsoratra tsirairay. Fa kosa, mamaly ny fahalianantsika ny hamakiana azy ireo amin'io andalana io. Raha mijery akaiky isika dia hahita:
Voalohany dia lazainay ny antony nifidiananay ny distros voalaza etsy ambony, mifototra amin'ny Distribution rehefa mandeha ny fotoana fizarana Linux.
Avy eo dia manao ny asanay izahay ho toeram-piasana mendrika SysAdmin, na amin'ny Debian na any openSUSE.
Aorian'izay dia mianatra ny fomba fanaovana Functional Hypervisor isika, izay hanohana ireo mpizara virtoaly rehetra ilainay.
Avy eo izahay dia lasa anisan'ny mpizara Infrastructure. Hoy izahay hoe "ampahany" satria ny Network Time Protocol Ho hitantsika izany rehefa miresaka momba ny Authentication isika.
Lohahevitra sasantsasany no resahina ary hodinihina
Ny serivisy fanamarinana sy ny serivisy dia mifantoka amin'ny SME
Fanamarinana PAM. Fampiharana serivisy ho an'ny tamba-jotra, miaraka amin'ny fanamarinana sy alalana avy amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa voasoratra amin'ny mpizara tokana:
Server miorina amin'ny CentOS 7 -miaraka amina interface interface roa- miaraka amin'ny birao VADIKO, NTP, Dnsmasq, CentOS / Red Hat FirewallD, Runway - Gateway ho an'ny fidirana amin'ny Internet, fitantanana mpampiasa amin'ny alàlan'ny interface graphic, Kalamara, sns
Fitantanana ny mpampiasa eo an-toerana miaraka amin'ny Politic Password.
Mpizara hafatra Prosody - protokol XMPP
Mety, Serivisy mailaka
Serivisy fidirana amin'ny lahatahiry miorina amin'ny OpenLDAP
Domain Controller - Directory Directory miorina amin'ny Samba 4 farafahakeliny roa amin'ireo fizarana voafantina.
File Server ho an'ny Microsoft © Networks miorina amin'ny Samba4
Serivisy famindrana rakitra mifototra amin'ny Proftpd
Server server anao manokana
Serivisy hafa tsy dia manandanja loatra, fa io dia be mpampiasa
Ho an'ny Initiates in Service Administration na izay te-hianatra momba ilay hetsika, dia tena mamporisika anao izahay manomboka amin'ny voalohany ary amin'ny filaharana.
Ireo izay maniry hahita tontolo feno kokoa noho ilay natolotra, dia afaka mitsidika ireo tranonkala Internet natokana ho an'ny lohahevitra amin'ny Networks sy Serivisy. Betsaka amin'izy ireo ny amin'ny Espaniôla, Anglisy, ary koa amin'ny fiteny isan-karazany izay itenenan'olombelona eto amin'ity planeta ity.
Ho fanampin'izay, mikasa ny hanoratra andian-dahatsoratra kely izahay amin'ny FreeBSD ka io kely io dia fantatra kely Giant tsy fantatra amin'ny lozisialy maimaim-poana.
Raha misy oniversite, sekoly, andrim-panjakana na orinasa liana amin'ny fanatanterahana fampianarana Mazava ho azy momba ireo lohahevitra noresahina sy ireo izay ilaina ampidirina, dia manorata aminay, aza misalasala na tara. Eto izahay ho anao.
Miandry anao izahay amin'ny fizarana manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Tambajotra informatika ho an'ny SME: Fampidirana
Salama, tsara Fico ... tsara be ny andiany teo aloha ary manantena an'ity ...
Azafady mba alao antoka fa ny fizarana mailaka dia tsy "Mety", fanambarana izany!
Mirary soa amin'ny andiany, hanaraka azy aho.
Amin'ireo atiny tsara indrindra novakiako dia manantena ny lahatsoratra manaraka aho. Miarahaba anao Fico!
Fampidirana tena tsara, manomboka eo amin'ny tontolon'ny fitantanana tambajotra aho ary azoko antoka fa ity andianao izay arosonao ity dia ho fanampiana sy fitarihana lehibe.
Misaotra betsaka antsika rehetra naneho hevitra tamin'ny anaran'ny ekipa DesdeLinux. Miaraka amin'ny fanampiana sarobidy avy amin'ireo Luigys hajaina, heveriko fa afaka mankafy ny fizarana manaraka isika, raha tsy anio, rahampitso.
Hanibball Bean dia hoy izy:
Tena tsara, mifanaraka amiko toy ny fonon-tànana ity, miandry ny famoahana aho.
Mamaly an'i Hanibball Bean
Mampanantena zavatra betsaka ity andiany ity, ilay zavatra niainana mihoatra ny voamarina an'i Fico, nampiana ny fomba fanoratany sy ny firaketana an-tsoratra azy, dia mampitombo ny fahalalany betsaka.
Misaotra betsaka Fico amin'ny sitra-po tsara sy amin'ny fandraisan'anjara tsara.
Ale humanOS dia hoy izy:
Tena tsara ny lahatsoratra, toy ny mahazatra, mitondra antsika ny tsara indrindra amin'ny faharanitan-tsaina.
Mamaly an'i Ale humanOS
gpaulino dia hoy izy:
Tena tsara .. miandry ny manaraka, vaovao tena tsara!
Mamaly an'i gpaulino
Tena tiako ilay tolo-kevitra entin'i Fico, efa elaela aho no tsy namaky lahatsoratra nataonao. Tena manomboka amin'ny teboka ny zava-drehetra amin'ny fiainana. Hatrany am-piandohana sy noho ity andiany ity izay efa zava-misy ho ahy, satria tsy nandiso anay mihitsy ianao; Ireo mpitantana ny tambajotra SME dia hanitatra ny vinanay.
Araka ny nolazain'i Hanibball Bean andro vitsy lasa izay, mety tsara izy io, tsy ho an'ireo vao manomboka, eny fa na ireo efa za-draharaha aza fantatro fa hitohy. Sl2 ary salama daholo.
Ah, adinoko ny milaza fa ny andian-dahatsoratra kely momba ny FreeBSD no vaovao farany amin'ny tolo-kevitrareo.
Misaotra naneho hevitra, namana Crespo88 !!!. Ho hitantsika eo raha liana amin'ny FreeBSD Free Software ireo tia Linux. Hanana ny fotoana hahalalantsika raha izany.
Salama Fico: Novakiako ireo teny vaovao amin'ilay lahatsoratra hoe "Network Networks ho an'ny SME - Fampidirana" ary tena tiako ilay hevitra hoe "... manoratra andian-dahatsoratra kely momba ny FreeBSD hahafantarako kely ity Giant Giant of Free Software ity. » mampiasa ny teninao manokana. Ka omeko ny faniriana voalohany hanomboka hanao zavatra amin'ity fizarana UNIX maimaimpoana ity.
Liana amin'ireo lahatsoratra 2 momba ny fanamarinana ihany koa aho.
Ary amin'ny serivisy serasera mifantoka amin'ny SME, indrindra amin'ny "Serivisy famindrana rakitra mifototra amin'ny Proftpd" raha ny fahitanao azy raha toa ka azo atao ny mampihatra fanamarinana amin'ny alàlan'ny mpampiasa Active Directory miorina amin'ny Samba 4 fa tsy. an'ny mpampiasa eo an-toerana.
Nilaza tamiko ianao mba hampahatsiahy anao ireo lahatsoratra efa navoaka tao amin'ny DNS Bind a howto amin'ny fomba fampiharana ny Public Views.
Tsy misy antenaiko… ..
Miarahaba IWO!. Ho hitantsika ny fomba hanomezanay fahafaham-po ny fangatahanao. Tohizo miaraka aminay fa tsy hanenenanao izany!, 😉